FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA POMERANIAN - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Pomeranian
Tononkalo Pommania Mihetsika ary Pommania Ramatoa Dynamite. Ranabavy maloto avy amin'ny andalana tsara dia zazavavy sy fampisehoana mahafinaritra. Sary natolotry ny Pommania Pomeranians
Alika kely milanja kilalao ny Pomeranian. Ny loha dia miendrika volo ary mifanaraka amin'ny vatana. Mahitsy sy tsara ny vavahady fohy. Voalaza tsara ny fijanonana. Ny lokon'ny orona dia miovaova amin'ny lokon'ny palitao. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny maso miendrika amandy dia maizina sy antonony ny habeny. Ny sofina kely sy mijoro dia avo avo. Ny rambo misy volom-borona dia mivalona mahitsy ary fisaka amin'ny lamosina. Esorina ny lalàma indraindray. Ny Pom dia manana palitao matevina matevina. Ny akanjo ivelany dia lava, mahitsy ary masiaka amin'ny endriny, raha ny palitao kosa malefaka, matevina ary fohy. Ny palitao dia lava kokoa amin'ny faritry ny hatoka sy tratra. Tonga amin'ny loko sy loko isan-karazany ao anatin'izany ny mena, volomboasary, fotsy, fanosotra, manga, volontsôkôlà, mainty sy mainty ary fotsy, amboadia amam-boasary, volom-boasary, brindle ary parti-loko, izay fotsy misy marika misy loko.
Alika kely miavonavona ny Pomeranian. Izy io dia manan-tsaina, dodona ny hianatra, tena mahatoky amin'ny mpikarakara sy ny fianakaviany. Ny Pom dia mpiara-miasa mahafinaritra ary alika mampiseho. Ny fahaizan'ny olona sy ny toetrany be fitiavana dia tia ny maro. Mailo, tia karokaroka ary mavitrika izy: iray amin'ireo mahaleo tena indrindra amin'ny karazana kilalao, mila tanana hentitra sy malefaka izy io. Ny fahavelomany sy ny fanahiny dia mahatonga azy io ho tian'ny olona tsy miraharaha alika kilalao. Pomeranians dia mety ho mpihinana picky. Raha ampidirina tsara izy ireo dia matetika miaraka amin'ny alika hafa sy biby an-trano nefa tsy misy olana. Manamboatra mpiambina kely i Poms. Ampianaro aloha ity alika ity fa mety hiondrika in-droa izy rehefa maneno ny lakolosim-baravarana na rehefa misy mpitsidika, fa mangina kosa avy eo. Mahareta tsara momba an'io. Poms dia manana toetra mahafinaritra ary tsy mifikitra amin'ny mpikarakara azy. Ity pup faly ity dia mahay mianatra fika. Ny Pomeranians dia mila mahita ny tompony ho lehibeny raha tsy izany dia ho lasa be fangatahana izy ireo. Raha avelanao ny alikanao hiteny ANAO hoe rahoviana ary aiza no hanaovana zavatra fa tsy manana olana mety hitranga eny an-tananao ianao ary mety tsy ho tsapanao akory izany. Tsy mahafatifaty na marani-tsaina izy io, fa manjaka ary hitarika olana lehibe kokoa amin'ny ho avy raha mbola tsy nanao izany. Noho io karazany kely io sy ny endriny mahafinaritra an'i Ewok, dia misy isan-jaton'ny Poms izay iharan'ny Syndrome kely alika , fitondran-tena entin'ny olombelona izay inoan'ny alika fa misy azy mpitarika fonosana amin'ny olombelona. Izany dia mety hiteraka ambaratonga maro samihafa olan'ny fitondran-tena , izay TSY toetra Pomeranian, fa ny fihetsika entin'ny fomba itondran'ny olombelona manodidina azy ireo . Ny fitondran-tena dia misy, fa tsy ferana fotsiny fanahiana fisarahana , lasa fanahy iniana, mitaintaina, sahy ary indraindray mahonon-tena, tsy misalasala manafika alika lehibe kokoa. Fihetsika miambina sy mivonkina be loatra rehefa manandrana milaza amin'ny olombelona IZAY IZAY TIANY hataon'izy ireo. Izy ireo dia mety ho voatokana ho an'ny olon-tsy fantatra, manongilana azy ireo tafahoatra, ary indraindray mimenomenona, mikitika ary manaikitra. Satria ny ankamaroan'ny olona dia mandray an'io canine kely io amin'ny fomba tsy ahitan'ny alika azy ireo ho toy ny pack pack, dia tsy tokony ho an'ny ankizy izy ireo. Na izany aza, raha omena lalàna hanaraka azy ny Pom, ferana ny zavatra avela hatao, ny fandehandehanana isan’andro ary ny mpitarika milamina tsy matoky tena izay mampiseho fanamafisana matoky ny alika, izany dia mety ho boribory tsara, ara-tsaina. mpiorina azo itokisana, azo atokisana ary mahafinaritra. Noho ny habeny dia afaka manao namana tsara ho an'ny zokiolona izy.
Lanja: 3 - 7 pounds (1 - 3 kg)
Tamin'ny taona 1800 dia mety nilanja hatramin'ny 30 pounds ny Pomeranians. Ireo Poms lehibe kokoa izay miseho ankehitriny dia antsoina matetika hoe 'throwback' Pomeranians.
Ireo pomeranianina dia mora voan'ny patella (kneecap) very, mihena ny aretim-po, aretim-po, areti-maso, fahasosorana amin'ny hoditra ary lo ny nify ary very matetika. Soso-kevitra ny hanome sakafo alika maina azy ireo na ny taolana mamy mamy isan'andro, mba hitazomana ny nifiny sy ny hihy ho salama tsara. Ankizy Pom vao teraka dia tena bitika sy marefo. Zaza telo vao teraka dia azo tazomina eo an-tànan'ny olona. Matetika ny sisin'ny sisiny kely kokoa dia mila aterina amin'ny faritra cesarean. Rehefa antitra ilay alika dia mety ho lasa nopetahany tasy sola.
Ny Pomeranian dia tsara amin'ny trano ipetrahana. Ireo alika ireo dia mihetsika be ao an-trano ary tsy maninona raha tsy misy tokontany. Tandremo sao mamono be izy ireo amin'ny andro mafana.
Mila ny Poms a mandeha isan'andro . Ny lalao dia hikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hahavita ny fahatsapan'izy ireo voalohany handeha. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra azo antoka sy malalaka tsy misy firaka, toy ny tokotany malalaka sy mimanda.
Alika kely 2-4 eo ho eo
Ny palitao lava lava sy lava nataon'i Pomeranian dia tokony hosasana matetika. Raha miasa avy eo an-doha ianao, mizara ny palitao ary manosotra azy eo aloha, dia hilatsaka milamina tsara indray izy io, ka mora ilay asa, na dia mandany fotoana aza. Ny cottony undercoat dia alatsaka indray mandeha na indroa isan-taona. Shampooina maina rehefa ilaina. Diovy ny maso sy ny sofina isan'andro ary ento ny alika hanao fizahana nify matetika. Ny Pomeranian dia mpandraraka tsy tapaka.
Ny Pomeranian dia nahazo ny anarany avy tany amin'ny faritr'i Pomerania, izay ankehitriny dia ny faritr'i Alemana sy Polonina, izay novolavola avy tamin'ny razambe Spitz taloha. Ireo Pomeranianina tany am-boalohany dia lehibe kokoa, milanja hatramin'ny 30 pounds, ary niasa ho mpiandry ondry. Marie Antoinette, Emile Zola, Mozart ary ny Mpanjakavavy Victoria dia samy nanana Pomeranianina avokoa. Tamin'ny 1870 dia nahafantatra azy ireo ho karazana ny Kennel Club any Angletera. Tamin'ny taona 1888 dia nanomboka niterahana sy nampiseho ireo alika ny Mpanjakavavy Victoria. Izy no nanomboka nanangana azy ireo tamin'ny habeny, nahatonga ny karazany ho malaza be tany Angletera. Ny Pomeranian dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny taona 1888. Ny talenta Pom sasany dia misy: mpiambina, fahakingana ary fanaovana hafetsena. Poms dia manao mpihira borosy ambony.
Avaratra, kilalao AKC
Guri ilay Pomeranian loko mainty sy fotsy amin'ny 3 taona— 'Guri dia tena marani-tsaina sy be fiahiana. Tsy afaka mijanona amin'ny fanorohana ireo tiany izy. Sariaka amin'ny alika hafa izy ary manana tanjaka be. Ny zavatra tiany indrindra dia ny baolina keliny. Izy foana no ivon'ny saina ary mazava ho azy fa tsy mampaninona azy izany. '
Ali the cream Pomeranian amin'ny faha-7 taonany
'Ity no Tchoupie (tononina hoe Choppy), amboadia vehivavy Pom. Tokony ho 9 volana izy tamin'izay no nalaina ireto sary ireto. Tchoupie dia Pom kalitaon'ny fampisehoana izay nahavita tsara tamin'ny seho maromaro. Manantena izahay fa hamita azy indray andro any, saingy satria tsy manam-paharoa ny lokony dia amboadia vitsivitsy fotsiny i Poms no lasa tompon-daka hatreto. ' Sary natolotr'i Russ sy Debby Bergeron
Tucker the Pomeranian— 'Misaotra anao tamin'ny izany fampahalalana rehetra izany . Manana valiny mahafinaritra isika ao anatin'ny iray andro monja! '
'Kujo ilay sôkôla merle Pomeranian — Nandray mpamonjy Pom aho ary raiki-pitia taminy. Taorian'ny fikarohana ny karazany nandritra ny herintaona teo dia nanapa-kevitra ny hitady Pom manokana aho. Nahita an'io lehilahy kely tsara tarehy io aho ary raiki-pitia teo noho eo. Nijery ny tranokala foana aho ary nanomboka nandinika ny mpiompy. Rehefa afaka iray volana niresaka tamin'ny mpiompy aho dia fantatro fa ity zazalahy kely ity dia tonga lafatra ho ahy. 10 herinandro izy amin'ity sary ity ary tiako be izy. Fiainana feno, be filalaovana, be fitiavana ary tena mahay izy. Na dia tsy alika falifaly aza izy dia mipetrapetraka foana alohan'ny hodiany, manana fomba fanao tsara izy. Ny fahazarana mampiavaka azy iray hafa dia ny fitiavany mandry amin'ny rivotra rehefa tonga izany, toa an'i Monroe be izy miaraka amin'ny volony miposaka. '
'I Gizmo, rahalahin'i Kujo. Izy dia Pomeranian mainty hoditra tsy madio. Izy no mpamonjy ahy Pom ary iray amin'ireo antony nitiavako ilay karazany. Aseho eto amin'ny 2 taona ary milanja 5 lbs. Izy sy Kujo dia pitipoà roa ao anaty vala. '
Pommania P Diddy dia ohatra tsara tarehy amin'ny karazany misy loha tsara sy habe ary palitao marina. Sary natolotry ny Pommania Pomeranians
Pomm Pomeranania Little Star dia ohatra iray amin'ny mety ho endrik'alika Pomeranian puppy izay mahafeno ny fenitra fampisehoana. Sary natolotry ny Pommania Pomeranians
Link, Leila ary ny 'rahalahin'izy ireo' Dash
Beau the Pomeranian puppy at 7 herinandro - 'Tianay izy manaikitra fa tena tia be izy ary tia milalao amin'ny rehetra!'
Jereo ny ohatra bebe kokoa momba ny Pomeranian
Sary Pomeranian 1
Sary Pomeranian 2
Sary Pomeranian 3
Sary Pomeranian 4
Sary Pomeranian 5
Alika Pomeranianina: Sarivongana Vintage azo angonina
mifangaro mastiff rottweiler amidy
florida cracker cur alika kely amidy
alika manana maso manga sy maso volontany